Global Voices teny Malagasy » Iran: Mpitoraka blaogy mety ho voaheloka ho ‘manangana ady amin’Andriamanitra’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Aogositra 2010 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika avylavitra
Sokajy: Fahalalahàna miteny, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Misonga ny ahiahy fa hoe i Shiva Nazar Ahari , mafana fo iray amin'ny fiarovana zon'olombelona nofonjàna, mpitoraka blaogy, ary tonian'ny famoahana ao amin'ny tanonkalan'ny Komitin'ny Mpitatitra momba ny Zon'Olombelona [Committee of Human Rights Reporters] ao Iran, dia mety hohelohina noho ny resaka moharbeh  ( fananganana ady amin'Andriamanitra/fankahalàna an'Andriamanitra) amin'ny fitsarana ho avy atsy ho atsy.
Any Iran, mitondra any amin'ny fanamelohana ho faty ny toy izany.
Ny mpisolovava an'i Shiva Nazar Ahari, Mohammad Sharif, dia naneho  ahiahy manodidina ny fitsarana ny olona arovany hatao atsy ho atsy noho ny fiheverany ny mety hisian'ny vesatra goavana momba ny moharebeh amin'ny tranga mahazo azy.
Nazar Ahari dia nosamborina tamin'ny 14 Jona 2009 tao amin'ny biraony. Rehefa nahavita 102 andro tany amponja, dia navotsotra izy tamin'ny 23 Septambra 2009 rehefa nandoa onitra $200,000. Nandany 33 andro tamina toerana mitoka-monina izy nandritra ireo fotoana nitazonana azy. Nosamborina fanindroany indray izy tamin'ny 20 Desambra 2009, ary naverina amponja tsy nisy alaharo alaharo sy fanazavana avy amin'ny manampahefana momba ny antony famonjàna azy.
Ny fihodinana faharoa amin'ny fitsarana azy dia voalaza hatao amin'ny 4 Septambra 2010.
“Tsy hiala eto Iran aho”
Ao anatin'ity video fohy ity, maneho an'i Nazar Ahari taorian'ny namotsorana azy avy tany amponja, dia niteny izy fa nanapa-kevitra ny hijanona eto Iran ihany na inon-kidona na inon-kihatra. Milaza izy fa tsapany ho ao no tena misy ilàna ny asany.
Ity sary iray  misy an'i Nazar Ahari mirotsaka antsitra-po miasa ho ana fikambanana tsy miankina iray manohana ireo ankizy eny an-dalam-be sy ireo ankizy miasa.
Arman Sabz, Iraniana iray mpitoraka blaogy dia manoratra  [fa]
Raha tondroin-dry zareo ho fahavaloln'Andriamanitra izy, iza indray no hanaraka avy eo… Indray andro any dia mety hataony amintsika koa ny toy izany… Raha miandrandra “super hero” ho avy hanova ny anjarantsika ianao, izy ireo kosa mety haka antsika na ny iray amin'ireo malalantsika hofonjàna.
Mpitoraka blaogy iray hafa, Azad Bashim, no manoratra  [fa] fa tandindonin-doza Shiva, na dia tsy misy fototra aza ny fiampangana ary mahatohitra ny terisetra izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/27/8535/
 dia naneho: http://www.iranhumanrights.org/2010/08/nazar-ahari-lawyer-concerned/
 Ity sary iray: http://lh5.ggpht.com/_uDK3j7n1ynE/TGxCKmMaTHI/AAAAAAAAAd0/FaLmisTAq40/s640/2rnk1oi.jpg
 manoratra : http://azadbashim.wordpress.com/2010/08/18/shiva-nazar-ahari/